संक्रमितलाई भेटेका डाक्टर सा‘पको परीक्षण किन भएन ? – sunpani.com
संक्रमितलाई भेटेका डाक्टर सा‘पको परीक्षण किन भएन ?
सुनपानी । २८ बैशाख २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको ‘आसपास’मा पुगेका व्यक्तिहरुको स्वाव संकलन गरेर कोरोना परीक्षण भइरहेको छ ।
२४ जना कोरोना संक्रमितको सिधा सम्पर्कमा पुगेका, विभिन्न कामले टोलछिमेकमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले जोखिम मान्दै कोरोना परीक्षण गराएका छन् । शुरुवाती संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका २३ जना पोजिटिभ देखिएपछि जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीमा केही डर पैदा हुनु स्वभाविक नै हो । तर, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण थालिसकिएको छैन । जनप्रतिनिधिसम्मले पहिलो लटमा आफ्नो स्वाव दिएर पठाएका छन् ।
संक्रमितले भने अनुसार उनी पुगेको ठाउँका व्यक्ति, आफन्ती, काम विशेष (जसमा पसलहरु पर्छन्) ले सम्पर्क रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना परीक्षण भइरहदा नेपालञ्ज एकजना डक्टरले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको बीचमा उपचार गरेको खुलासा भएको छ । संक्रमितले नै आफू विरामी हुँदा ती डाक्टरकहाँ गएर उपचार गराएको बताएका छन् । तर, डाक्टर सा‘पलाई अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण गरिएको छैन ।
संक्रमित भइसकेपछिको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीले सम्पूर्ण सावधानी अपनाएका छन् । तर, संक्रमण नदेखिदा बिरामी भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा डाक्टर सा’पले सम्पूर्ण सावधानी अपनाउनु भएको थियो कि थिएन ? डाक्टर सा‘पको तत्काल परीक्षण गर्न आवश्यक छ कि छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ । सम्बद्धहरुले डाक्टर सा’पको कोरोना जाँच गर्ने मेसो मिलाइरहेपनि अहिलेसम्म स्वाव लिइसकेका छैनन् । संक्रमितले नै उपचार गर्न गएको थिए भनेकाले डाक्टर सा‘पको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । आजभोलीमा नै स्वाव लिइन्छ स्रोतले दावी गरेको छ ।
ती डाक्टर सा’पमात्रै होइन, अरु स्वास्थ्यकर्मी र पहिलो संक्रमितको स्वाव लिदादेखि संक्रमित धेरै देखिएको टोललाई सील गर्न पुगेका र पछि देखिएका संक्रमितको स्वाव लिदासम्म खटिएका सुरक्षाकर्मीको पनि कोरोना परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।